Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း)
Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
ရောင်ရမ်းခြင်းဆိုသည်မှာ အနာ (သို)့ ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုခုကို ခန္ဓါကိုယ်မှ ပုံမှန် ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လက်ကို ရှမိတယ်လို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ရှမိတဲ့ နေရာတစ်ဝိုက်မှာ ဖောင်းပြီးနီလာခြင်းဟာ ရောင်ခြင်းရဲ့ ဖြစ်နေကျ လက္ခဏာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓါမှာ ရှိတဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကနေ ဒဏ်ရာဖြစ်တဲ့နေရာကို သွားပြီးပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရန် အထူးဆဲလ်လေးတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ တခါတရံမှာ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ပြန်လည်ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မြန်စေသော်လည်း ရောင်ခြင်းဟာ အန္တရာယ်ရှိတတ်ပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ နှလုံးနံရံရဲ့ အပြင်ဘက်ကြွက်သားအလွှာရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြွက်သားအလွှာဟာ နှလုံးမှ တခြားခန္ဓါအစိတ်အပိုင်းတွေကို သွေးတွေ အညှစ်းအထုတ်လုပ်ပေးရန် တာဝန်ယူပေးထားပါတယ်။ ဒီကြွက်သားရောင်တဲ့အခါမှာ သွေးတွေကို ညှစ်မပေးနိုင်တော့ပဲ နှလုံးခုန်မမှန်တာ၊အသက်ရှုခက်တာအပြင် ပိုဆိုးလျှင် သွေးခဲမှု၊နှလုံးရပ်ခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်း သို့ နှလုံးကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ပြသနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချက်က လူမျိုးမရွေး၊ကျားမ မရွေး၊အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပြီး တခါတရံမှာ လက္ခဏာလဲ မပြတတ်ပါဘူး။ လက္ခဏာတွေပြရင်တောင် တုပ်ကွေးမှာ ပြသလို မောခြင်း၊ဖျားခြင်း၊အဆစ်ကိုက်ခြင်း သို့ ရောင်ခြင်းနှင့် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ပြတတ်တာကြောင့် နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း လို့ ရောဂါအဖြေထုတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ ကျန်းမာတဲ့လူတွေမှာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ အငိုက်ဖမ်းတိုက်ခိုက်တတ်တဲ့လက္ခဏာကြောင့် သူဟာ အသက်ငယ်သူတွေ ရုတ်တရက်သေဆုံးရခြင်းရဲ့ တရားခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ဟာ များသောအားဖြင့် လက်မှာ ရှမိတဲ့ အနာလို ကုသမှုမရှိပဲ သူ့ဘာသာပျောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆိုးရွားတဲ့ရောဂါတွေမှာတောင် နှလုံးကြွက်သားတွေကို တိတ်တဆိတ်ထိခိုက်နေစေပေမယ့် နှလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေတော့ ဘယ်တော့မှ မပြပါဘူး။
နောက်ပိုင်းမှာ နှလုံးဟာ ၎င်းရုန်းကန်နေရတာကို အောက်ပါ လက္ခဏာတွေနဲ့ ပြလာပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း သို့ နှလုံးတုန်ခြင်း
Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ဟာ နှလုံးကိုတနည်းနည်းနဲ့ ရောက်သွားနိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယား သို့ မှိုပိုး တွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါပိုးတွေက နေရာယူဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ရောဂါကို ဖယ်ရှောင်းရန် ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီး ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် ရောင်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သို့သော် တန်ပြန်ထိခိုက်နိုင်ပြီး နှလုံးကို အားနည်းစေပါတယ်။
အရေပြားလေးဖက်နာ ကဲ့သို့သော ကိုယ်ခံအားစနစ်က မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်စေတဲ့ ရောဂါတွေမှာ ကိုယ်ခံအားစနစ်က နှလုံးကို ပြန်တိုက်တာကြောင့် ရောင်ခြင်း နှင့် ထိခိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ တခါတရံမှာ နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို မသိနိုင်ပေမယ့် အောက်ပါအချက်များမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ တရားခံတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် တွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ဗိုင်းရပ်စ် တွေမှာ coxackie virus B၊ the adenovirus (အအေးမိခြင်းကိုဖြစ်စေသော) နှင့် parvovirus B19(fifth disease လို့ခေါ်တဲ့ အင်ပြင်ဖြစ်စေသော) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ တခြားဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ echoviruses (အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ)၊Epstein-Barr virus(mononucleosis), နှင့် rubella (ဝက်သက်)တို့ဖြစ်ပါတယ်။ AIDS လူနာတွေဟာလဲ ဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားပါတယ်။
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်းဟာ staphylococcus၊ streptococcus၊ lyme disease ကိုဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေနှင့် ကြက်ညှာချောင်းဆိုး ကိုဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ဖြစ်တာ ရှားပါတယ်။
Candida မှိုရောဂါပိုး၊ molds နှင့် တခြားမှိုရောဂါတွေကလည်း နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကပ်ပါးပိုးဆိုတာ ပိုးကောင်တွေကနေပါလာတတ်ပြီး နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကို ကူးစက်စေပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲပြီး အမေရိကတိုက် အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်တာ များပါတယ်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါများ ဥပမာ သွေး လေးဘက်နာရောဂါမျိုးတွေဟာ နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ကို အတည်ပြုဖို့ ခက်ခဲသော်လည်း ဆရာဝန်တွေက စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို လျှော့ချပစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးစစ်မှုတွေက ရောဂါပိုး သို့ ရောင်ခြင်း လက္ခဏာတွေကို ပြနိုင်သလို ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါရှိမရှိ သိနိုင်ပါတယ်။ Electrocardiogram (ECG) ဆွဲခြင်းဖြင့် နှလုံးခုန်မမှန်မှု သို့ နှလုံးကြွက်သားထိခိုက်မှုကို သိနိုင်ပြီး echocardiogram(ultrasound) ရိုက်ခြင်းဖြင့်လဲ နှလုံးကြီးမှုရှိမရှိသိနိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ ဆရာဝန်တွေက နှလုံးတစ်ရှူးနမူနာ အသားစ စစ်ဆေးခြင်းကို လည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Myocarditis (နှလုံးကြွက်သားရောင်ရမ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း ရဲ့ ကုထုံးဟာ ရောင်ရမ်းမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ အပေါ်မူတည်ပါတယ်။ တချို့သူတွေမှာ သူ့ဘာသာ အရောင်ကျပြီး လုံးဝအကောင်းပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်မှာ အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုလျှင် သင့်ဆရာဝန်က အရောင်ကျဆေးပေးပြီး ကူညီပါလိမ့်မယ်။ အနာယူဖို့နဲ့ ခန္ဓါကိုယ်က မလိုအပ်တဲ့ အရည်ပိုတွေ စွန့်ထုတ်နိုင်ရန် ဆီးဆေးတွေလဲ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေက ရောဂါပိုးတွေကို သေစေနိုင်ပြီး corticosteroid တွေက အရောင်ကျစေပါတယ်။
နှလုံးဟာ သွေးကို ပုံမှန်ညှစ်သင့်သလောက် မညှစ်နိုင်လျှင် ဆရာဝန်က သွေးကြောတွေမှာ သွေးတွေကောင်းစွာ စီးဆင်းနိုင်အောင် ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ တခြားဆေးတွေကလည်း နှလုံးခုန်မမှန်တာကို ကုသနိုင်ပါတယ်။
ကုထုံးတော်တော်များများဟာ နှလုံးအတွက် ဝန်ကို သက်သာစေပြီး နှလုံးကို သူ့ဘာသာပြန်ကုသစေပါတယ်။ ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးတဲ့ သူတွေမှာဆိုလျှင် pacemaker သို့ defibrillator ကဲ့သို့ နှလုံးစက်တွေ တပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် နှလုံးစွမ်းရည်ကျဆင်းလာလျှင် ဆေးရုံမှာ တခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ နှလုံးဟာ ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်တွေက နှလုံးအစားထိုးကုဖို့ တိုက်တွန်းနိုင်ပါတယ်။
Myocarditis. (n.d.). Johns Hopkins Medicine, based in Baltimore, Maryland. Retrieved March 4, 2012,fromhttp://www.hopkinsmedicine.org/heart_vascular_institute/conditions_treatments/conditions/myocarditis.html
Myocarditis Foundation ~ Knowledge nurtures hope.. (n.d.). Myocarditis Foundation ~Knowledge nurtures hope.. Retrieved March 4, 2012,
Myocarditis: MedlinePlus Medical Encyclopedia. (n.d.). National Library of Medicine -National Institutes of Health. Retrieved March 4, 2012,
from http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000149.htm Myocarditis. (n.d.). Johns Hopkins Medicine, based in Baltimore, Maryland. Retrieved March 4, 2012,from http://www.hopkinsmedicine.org/heart_vascular_institute/conditions_treatments/conditions/myocarditis.html